ရွှေမလေးတွေ ပြည့်တန်ဆာလုပ် နေတဲ့အိမ်များ (အထူးဆောင်းပါး) | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
Ko Nyo Win‘s photo.
This entry was posted on December 23, 2012, in ဆောင်းပါး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ရခိုင်ရှေးဟောင်းကျောက်စာတွေမှာရေးထားတဲ့ ဘာသာစကား ရိုဟင်ဂျာများတို့ပြောဆိုနေသော ဘာသာစကားဖြစ် …